Photocreator wuxuu ku siinayaa wax walba oo aad ku abuuri karto muuqaalo macquul ah daqiiqadaha | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Khayraadka, dhowr
Waxaan horeyba u haysanay barnaamijyo badan oo webka ah oo aan ku badalno barnaamijyadaas aan kumbuyuutarkeena ku rakibnay mar uun. Photocreator waa mid kuu ogolaanaya inaad abuurto muuqaalo macquul ah daqiiqado gudahood si looga baxo shaqooyinka qaarkood.
Photocreator waa sida nooc ka mid ah barnaamijyada maareynaya inay na siiyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah abuurista muuqaaladaas dhabta ah ee aan u baahan nahay inaan ku soo dhigno shabakad bulsheed ama xitaa Abuur "shey geesi" websaydhka wax kasta oo lagu iibiyo.
Waxay ina dhigeysaa hal dhinac noocyo badan oo moodello dhab ah la sawiray kooxdii bilawday barnaamijka webka, dhanka kalena muuqaalada 3D-ka ah ee wata shaygooda si aan u daryeelo isku darka wax walba si muuqaalka ugu dambeeya uu u ahaado.
Waad fahmi kartaa in interface ka waxay noo oggolaan doontaa inaan bilowno oo aan jiidno walxaha in la isku daro oo markaa la abuuro muuqaalkii loo baahnaa. Waa barnaamij ku habboon qof kasta oo aan aqoon badan u lahayn naqshadeynta garaafka, laakiin haddii xikmadda ogaanshaha waxa fiican ay u muuqato iyo in kale.
Waxyaabaha qosolka badan ee ku saabsan Photocreator waa taas isticmaal Sirdoonka Artificial si wax looga beddelo wajiyada oo markaa aan u helno shucuurtaas awood u leh inay u beddelaan wax iibsi marka aan isticmaalno dhoola-caddeyntaas faafa. Waxyaabaha naxdinta leh ayaa ah in natiijada ugu dambeysa ee la gaaro ay buuxineyso dhammaan baahiyaheena, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo inaad aragto sida ay u shaqeyso iyo isticmaalka aad siin karto.
Sida aad qiyaasi karto, Photocreator maahan barnaamij gebi ahaanba bilaash ah. Waxay u oggolaaneysaa dhoofinta natiijada JPEG iyo inaan awood u yeelanno inaan galno feylka qaab PSD ah waa inaan marinno qorshihiisa gaaraya 20 doolar bishii. Dabcan, PSD mar hore ayaan dib u cusbooneysiin karnaa lakabyada waxaanan si qoto dheer ugu dhex mili karnaa natiijada la gaarayo, maadaama aan u wareejin karno Photoshop ama xitaa Sawirka weyn ee Serif Affinity.
Halkan waxaad ka heli kartaa Sawirqaade.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Abuur muuqaal macquul ah daqiiqado gudahood barnaamijka webka ee Photocreator
Qurxiyo dhijitaal ah oo leh Photoshop bilowga ah